HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ဂရိတ်အန္တရာယ်အတွက် Metro လိုင်း
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
အဆိုပါ 2017 ခုနှစ်တွင်ဘီလီယံခန့်51.2 အကြောင်းကိုမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုကပြောသည်ကန်ထရိုက်ခဲ့သည်အများပြည်သူထံမှထိခိုက်ခဲ့ရသည်။5နှစ်ပေါင်း 1,5 မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအတွက်လုပ်စာချုပ်များမှာအားလုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုထင်ရှား။ , ၎င်းသည်အညီဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါတစ်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်အလေးအနက်ချိုဖြစ်ပေါ်စေအကြံပြုခဲ့သည်။
Sözcü သတင်းစာ ဒီနေ့ရဲ့ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဂျူဒီ Toker များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်ဟာ Metro ခွအေနအေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခဲ့သည်။ Toker, 20175လိုင်း၌ဤတင်ဒါခံစားခဲ့ရပြီ, နူးညံ့၏ဖန်ဆင်းထားသည်, သူ 1.2 ဘီလီယံအထိအကြောင်းကိုအများပြည်သူကဆိုသည်။ ဒါဟာအစကမြေအောက်ရထားတည်ဆောက်မှုအလားအလာကပ်ဆိုးကြီး 1.5 နှစ်ပေါင်းရပ်တန့်ရန်အလေးအနက်ချိုစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့သည်။
အဖြစ် Toker ရဲ့စာ၏သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအောက်ပါအတိုင်း:
"အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ခြောက်လ molehill လိုပဲ။ 1.5 နှစ်ပေါင်းလေးနက်အန္တရာယ်များဖြစ်စေမြေအောက်ရထားလိုင်းများတော့ဘူး။ "
ငလျင် CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ Group ၏ဥက္ကဋ္ဌ Tariq baled သည်ဤစကားတိုးပွားလာအရေးပါမှုတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တွင်မျှော်မှန်းထားသည်။ အဆိုပါ Murat İnceoğluထံမှ baled Gazeteduvar said:
"ပြင်းထန်ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်မပြည့်စုံဆောက်လုပ်ရေးမှအလုပ်၏ဤလိုင်း ( ... ) အတွက် 1.5 နှစ်ပေါင်းအဘယ်သူအားမျှကတည်းကမြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအလွန်လေးနက်သောဘေးဥပဒ်ကိုတစ်ဦးချိုဖြစ်ပေါ်စေ၏။ "
ကျွန်မအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ပြန်လာသောအခါက Metro တင်ဒါဖတ်ပါ။ နှစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း IMM သူသည်ထိုနေ့, မတ်လ32017 အတွက်အောက်ပါငါးမြေအောက်ရထားလိုင်းများအားလုံးနူးညံ့ခဲ့သညျ။
Kirazli Halkalı, Flat-GöztepeÜmraniye-Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Tuzla-Pendik Kaynarca Başakşehir-Kayaşehir
ထို့အပြင်နည်းလမ်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်ဤ Pre-qualification နူးညံ့၏ဘုံလက္ခဏာသတိပေး:
ထိုသူအပေါင်းတို့သည် IMM အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကဆုံးဖြတ်ပမာဏထက်ပိုမိုမြင့်မားသန်းရာပေါင်းများစွာမှပမာဏ "ချည်ထားလေ၏။ "
Makyol-Astur-İçtaş- Galleon Kirazlı-အားဖြင့်လက်ခံရရှိHalkalı မြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏ဥပမာ:
ဘီလီယံကို2112 သန်း 656 586 တထောင်နှုန်း: ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအကြောင်းကိုလေလံမီ။
အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းများတွင်အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများ:2414 ဘီလီယံကိုတထောင်နှုန်းနဲ့ 401 632 သန်း
301 သန်း: ဆန့်ကျင်ပြည်သူ့အသိပေးစာ
ဒါကြောင့်ဈေးလျှော့ IMM ကိုလက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအနေကြီးမားတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများတင်ဒါ ပို. စျေးကြီး 14.28 ရာခိုင်နှုန်းကိုပူဇော်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ကမက်ထရို၏ငါးခုအတွက်အမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးဘီလီယံအထိ 8.6 နှုန်းမက်ထရိုလိုင်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်, စာချုပ်၏အရွယ်အစားနုဟာ IMM 9.8 ဘီလီယံကို TL အောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်။
အဆိုပါခြားနားချက် 1.2 ဘီလီယံကိုဆန့်ကျင်အများပြည်သူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ဆုံးအချိန်တိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီကာလကံကြမ္မာ shared စီမံကိန်းကိုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေန၏ဖျက်သိမ်းခြင်းပြီးနောက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ကျောကောင်းသောအရာကိုမှ irradiated အများပြည်သူလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါခရီးသွားဧည့်ရေးစင်တာများတွင်ပျက်စီးတံတားစိုးရိမ်ရေမှတ် radiates Kapuzbaşı 26 / 08 / 2014 အန္တရာယ်အတွက်ပျက်စီးတံတား၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာKapuzbaşıထွန်းလင်း: တစ်ရှည်လျားသောခရီးKapuzbaşıရေတံခွန်များ၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိတိုးရစ်, သဘာဝအလှတရား၏မျက်နှာကိုမှာသူတို့ရဲ့လေးစားမှုကိုဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး။ သို့သော်ကျဉ်းမြောင်းသောနှင့်အကွေ့အကောက်များသောလမ်းများ, ထိုဒေသတွင်လုံလောက်သောပျော်ပွဲစားစားပွဲ၏မရှိခြင်းဖြစ်မည်ဟု, သောထိတွေ့မှုကဒီ၏အလှတရားမရရှိသေးကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင့်တစ်ဦးခြေကျင်ပြဿနာနှင့်ယာဉ်ရပ်နားဧည့်သည်များ၏ပြိုကျဖို့တံတားဖြတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်။ ကကျော်ကြားရေတံခွန်အောက်တွင်မှပေါ်ထွက်လာအဖြစ်ယိုဖိတ်မှုတည်ရှိရာဧရိယာKapuzbaşıနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအများကြီးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ကြိုဆိုသည်။ အထူးသဖြင့်, နွေရာသီအတွက်ဧည့်သည်များ၏အရေအတွက်သည်ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းသို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ပရှိလည်းသူတို့မပါဘဲကဒီမှာလည်ပတ်ရှိရာနိုင်ငံများတွင်ထံသို့ ပြန်. မလာနေကြသည်။ Hal ထိုကဲ့သို့သောခဲ့ ...
အန္တရာယ် Soke အတွက်စခန်းလေယာဉ်ရုံ Spreading ဖြစ်ပါတယ် 22 / 11 / 2014 Soke ဘူတာများတွင်အန္တရာယ်လေယာဉ်ရုံ Spreading: Aydınရဲ့Sökeခရိုင်အတွင်းရှိရထားဘူတာရုံမှာစီစဉ်ထားပွနျလညျထူထောငျအလုပျနှငျ့ Landscaping နှစ်ပေါင်း 2015 ခဲ့သောမြေပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းပုံရန်အန္တရာယ်ပါဝင်သည်။ TCDD3။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ပြုလေ၏အလုပ်နှုန်းဟာစျေးနှုန်းတင်ဒါခံရဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်အကြောင်းကို 2013 သန်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအားဖြင့် 10 ၌တည်၏။ Garda လည်းတစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်မဆိုအတိုင်းအတာမျိုးသုဉ်းရန်အနည်းငယ်ပိုyüztutလေယာဉ်ရုံပြိုကျယူမဟုတ်။ အဆိုပါလေယာဉ်ရုံ Mehmet Demirezer ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကြောင်းဖော်ပြထားသည် Gara ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Soke အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, သူတို့ကယခုနှစ် 2015 နုမှထွက်ရန်မျှော်လင့်ဟုပြောသည်။ အီးယူဝန်ကြီး Volkan စတက်လွင်ပြင်, Aydınအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစော်ဘွား Durmaz နှင့် ...
အန္တရာယ်ရထားလမ်း Aydin အတွက်ကျောင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးပေးခဲ့သည် 28 / 03 / 2015 အန္တရာယ်ရထားလမ်း Aydin အတွက်ကျောင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးပေးခဲ့သည်: 22.01.2015 စာတမ်းဖတ်ပွဲများ, လုံခြုံရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသိပညာဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်ကြားကာလမှာ "panel က၏နောက်ဆုံးကြေညာချက်တွင်" အဆင့် Crossing Panel ကို "သမိုငျးတှငျ Izmir တှငျကငျြးပခဲ့; "ကျောင်းတွေအတွက်အစည်းအဝေးများ informational မှကျောင်းသားများကိုဖျော်ဖြေရာအရပျယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Panel ကိုရလဒ်များကိုxnumx.bölgအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ညွှန်ကြားမှုန်ထမ်းများနှင့်အစွန်း3ကျောင်းကိုပေါ်မှာတည်ရှိမီးရထားလမ်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းကော်မတီ Aydin ပြည်နယ်၏အဖွဲ့ဝင်များကဒေသတွင်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုယ်စားနှင့်အသိပညာပေးရန်ရထားလမ်းအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရှယ်ယာအပေါ်, 66 ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းကိုအသိပညာပေးများနှင့်လေ့ကျင့်ရေး bulunularak အကြောင်းကြား ။
အန္တရာယ်အတွက်ဓာတ်လှေကား Metrobus ရပ်နား Spreading ဖြစ်ပါတယ် 10 / 08 / 2017 တက္ကသိုလ်တစ်ဦးကကလေး၏လက် Cihangir ရပ်ကွက်အတွင်းအဆိုပါ Metrobus မှတ်တိုင်ပေါ်တွင်ဓာတ်လှေကားတံခါးကုိုကြည့်။ ကလေးများ Jahangir တက္ကသိုလ်ရပ်ကွက် Metrobus မကြာခဏယာဉ်မတော်တဆမှုဤမျိုးစုံကြုံနေရသည်ဟုတဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောအချိန်လေးရှိခဲ့ခိုင်မြဲစွာတံခါး၏လက်၌ကလေးတစ်ဦး၏ဓာတ်လှေကားထဲမှာရပ်တန့်ကပြောပါတယ်ဈေးရောင်းကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေအရောင်းအပေါ်မှာတင်သောသူကတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သူငယ်၏လက်မှလူနာတင်ယာဉ်အားဖြင့်မြင်ကွင်းကနေဖယ်ရှားခံအခက်အခဲများကလေးဆေးရုံကြီးမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ မကြာခဏအရောင်း၏ Speaking အတွေ့အကြုံရှိအဖြစ်အပျက်တွေ့ကြုံ, "ယင်းအမှုများသည်လက်နှင့်တံခါးကိုအပေါ်လက်ကိုင်အကြားညပ်ကလေးများတံခါးကိုဖွင့်လှစ်အထူးသဖြင့်အခါ။ အဖြစ်ကိုမကြာခဏကဒီမှာဖြစ်ပျက်နေကြသည်။ သူတို့ကအဲဒီမှာလက်မှာသောဓာတ်လှေကားထဲမှာအာရုံခံပြဿနာပြောတယ် ...
ဂရိတ်အန္တရာယ်မှ Abant လမ်း 20 / 05 / 2014 ဂရိတ်အန္တရာယ်မှ Abant လမ်းမကြီး: အထူးသဖြင့် Abant တွင်မလိုလားသည့်အမြင်များကြုံနေရလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအံ့သြဖွယ်သဘာဝနှင့်အတူတနင်္ဂနွေ။ အကြောင်းကီလိုမီတာ Abant ပြီးနောက်လမ်းပြိုကျကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်စေသည်။ ကြောင့်ကတ္တရာလမ်းလောင်းများ၏ပြိုကျဖို့အန္တရာယ်နေဆဲတည်ရှိအဝေးပြေးအားဖြင့်နောက်တဖန်ပြိုကျ။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းပျက်ကျ၏ခေါင်းစဉ်ကိုဆုံးရှုံးဖို့, အကြီးအဖြတ်၏ Abant တဦးတည်းကိုလိုလားကြပါတယ်။ ကြောင့်အချိန်လေးအတန်းပြိုကျမှုကြောင့်မြေပြိုမှု၏ရုံးခန်းမှမောင်းထုတ်ရန်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကီလိုမီတာမှ Abant မိုးသည်းထန်စွာမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်, ဒီ Bolu မဆိုကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ကြီးမားတဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုစနေနေ့အပေါ်လမ်းမပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ...
အဆိုပါခရီးသွားဧည့်ရေးစင်တာများတွင်ပျက်စီးတံတားစိုးရိမ်ရေမှတ် radiates Kapuzbaşı
အန္တရာယ် Soke အတွက်စခန်းလေယာဉ်ရုံ Spreading ဖြစ်ပါတယ်
အန္တရာယ်ရထားလမ်း Aydin အတွက်ကျောင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးပေးခဲ့သည်
အန္တရာယ်အတွက်ဓာတ်လှေကား Metrobus ရပ်နား Spreading ဖြစ်ပါတယ်
ဂရိတ်အန္တရာယ်မှ Abant လမ်း
ဂရိတ်အန္တရာယ်အတွက်Küçükçekmece metrobus မှတ်တိုင်
ငွိမျးခမျြးရေးYarkadaş: "ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro Peoples"